Download Zeppelin NT V1.0 maka FS2004 - Rikoooo
Zeppelin NT V1.0 maka FS2004
downloads 33 021
Zeppelin NT (New Technology Zeppelin) bụ ụdị ụgbọelu nke ụlọ ọrụ Germany bụ Zeppelin Luftschifftechnik GmbH, Friedrichshafen, rụrụ na 1990.
a add-on Ejiri FSDS3.5 wulie ya. Ihe di iche bu otutu LOD-ihe eji eme ihe FSX. Kachasị rụọ ọrụ n'ụzọ zuru ezu na-arụ ọrụ, ọkụ na mmetụta. A na-etinye ihe ndozigharị na anọ. Biko rụba ama na etinyere atụmatụ DirectX10.
Ihe niile dị mma ma dị mma
Onye edemede: Thomas Roehl, Joerg Hammes na Stefan Medelnik